राजेश हमालले १५ वर्षमा कै उमेरमा १८ वर्षकी युवतीसँग राखेका रहेछन् स; म्पर्क, अहिले आएर खोले ति युवतीबारे यस्तो रहस्य, हेर्नुहोस् यो भिडियो – Gazabkonews
राजेश हमालले १५ वर्षमा कै उमेरमा १८ वर्षकी युवतीसँग राखेका रहेछन् स; म्पर्क, अहिले आएर खोले ति युवतीबारे यस्तो रहस्य, हेर्नुहोस् यो भिडियो
१५ वर्षकै उमेरमा आँफुभन्दा ३ वर्ष जेठी युवतीसँग पहिलो स म्प र्क गरेका रहेछन् महानायक राजेश हमालले, तपाईले आफ्नो भ र्जि नि टी कति बर्षमा तोड्नु भयो भन्ने प्रश्नमा राजेशले रामोन्टिक हुँदै दिएको प्रश्नले पत्रकार पनि भए लाजले पानी रु आखिर को हुन् ति युवती जो आँफुभन्दा कान्छा राजेशसँग स म्ब न्ध का लागि तयार भइन् ? आखिर त्यो बेला के देखेर राजेशसँग उनले आफ्नो सबथोक सा टि न् ? धेरै वर्षपछि राजेश हमालले खोले रहस्य । राजेश हमाल पहिलो पटक यतिधेरै खुलेको देखियो । हेर्नुहोस् तपाईले कल्पना गरेको भन्दा फरक फरक उत्तर दिइरहेका छन् यो भिडियोमा राजेशले जुन हेरेर तपाईको हाँसो थामिने छैन